Diinta Islaamka iyo Dumarka – Kaasho Maanka
Garta dumarka iyo diinta islaamka lama gali karo, cid qaadaa furi kartana ma jiro. Diinta Islaamka waxa ay dumarka u ekaysiisay wax ay raggu leeyihiin amaba qayb bahaahinka ka tirsan, saamigooda oo kale ayay ku qiimaysay. Dumarkuna insaan xor ah oo sida ninka xaq iyo xuquuq insaani ah leh bay isu haystaan. Dumar badan oo islaam ah oo waxaan aragnaa maalin walba leh, diinta islaamka dumarka way karaamaysay oo way sarraysiisay, markaad waydiin ku celiso oo aad tiraahdo sidee bay ku sara marisay? Waxay ku leeyihiin dumarka waa la aasi jiray diinta Islaamka ka hor!
Diinta ka hor dumarka in la aasi jiray ma run baa? Maya, dunida dumarka ku nool lama aasi jirin ee wuxuu ahaa dhaqan ku kooban qabiillo yar oo carabta kamida sida qabiilka Quraysh la yiraahdo ee Maxamed ka dhashay. Quraysh caalamka waxa ay ka daganaayeen magaalada Makka uun, caalamka intiisa kale kama jirin gabar la aas. Si gabdhaha la gumeeyay ee sadkoodi la dhaafiyay loo sii hosaasiiyo waxaa loo sheegaa haddii aysan diinta jirteen in la aasi lahaa, sidaa darteed ciqaabta maanta ay ku jirto ay dhaanto aasid, waana run oo hadaad nooshahay malahayga way dhaantaa in adoo nool lagu aaso.
Hadduu qof yahuud ah maanta ku doodo in diinta yahuudda haddii aysan jiri lahayn adduunkani uu dabar gu’i lahaa oo raggu dhammaan lahaayeen, sababta marka la waydiiyana uu ku jawaabo in fircoon wiil walba oo dhasha uu dili jiray, diinta yahuudduna ay ragga karaamaysay oo badbaadisay, maadaama ay Fircoon ka furatay, waxay noqonaysaa sheeko lahi qoslo. Fircoon hadduu rag layn jiray yahuudda oo qudha ayuu layn jiray, yuhuudduna inta Quraysh caalamka ka daganayd bay adduunka ka daganayeen. Diinta Yuhuudda ragga adduunka ayay badbaadisay waxay lamid tahay Islaamku dumarka adduuka ayuu karaameeyey. Jawaabta oo kooban waa in diinta yahuuddu aysan ragga bad baadin, diinta islaamkuna sidoo kale aysan dumarka badbaadin oo aysan karaamayn haddii aynu sal uga dhigno karaamada iyo badbaadinta koox yar oo duruufo gaara ku jiray.
Dumarka islaamka xuquudoodii muuqatay iyo middii aan muuqanba diinta way ku tumatay, tusaale midda muuqatay ee jirka ahayd waxaa la amray inay qariyaan jirkooda oo cawro (ceeb) yahay, codkooduna cawro yahay, Furaha jannadana ninkeeda ayaa loogu dhiibay taas oo kadhigan in nolosheeda oo dhan ay ninka addoon u ahaato si ayna jannadu u seegin, talo iyo maamul waa laga qadiyay, xabsi guri ayaana lagu xukumay oo ilaahu faray inayna aqalka gees u dhaafin amar la’aan, iyo waliba in afar naagood uu hal nin wadaagi karo. Intaas waa intii muuqatay inta aanan muuqan waa in lagu sheegay in caqligeedu uuna dhamayn, diinteeduna nusqaan tahay, xattaa ahlu naarka ayay u badan yihiin innaga oo og in raggu ayna dumarka ka danbi yarayn balse ladu doodi karo inay ka danbi badan yihiin haddii aynu taariikhda insaanka milicsanno. Waxaas oo dhan waxaa ka daran in martabadda shaydaanka la dhaafiyay, shaydaan oo ilaah ku gacan sayray lana tirsaday masuulna ka ah dadka danbiyada ku dhaca ayaa ilaah isaga oo ka hadlaya waxa uu yir; (إِنَّ كَيدَ الشَّيطَانِ كَانَ ضَعِيفًا) “dhagarta shaydaanku waa mid tabar yar” halka Ilaah marka uu dumarka ka hadlayay yiri; (إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ) “Dhhagartiinu (dumarka) waa mid aad u wayn” taasina waxay muujinaysaa in islaamku dumarka u arko noole shar badan oo xittaa shaydaanka booska ku ciriirinaya.
Karl Marx waxa uu yiri “Qofka la addoonsadaa, marka uu dareemo in uu addoonyahay waa uu xoroobay” Intaan kor ku xusay iyo in kale oo badan aan la tirin karin oo dhib ah bay diinta Islaamka dumarka u gaysatay, Suuratul Cimraan, aayadda 14-aad ilaahay wuxuu tirinayaa waxa ragga la siiyay oo dunida loogu qurxiyay, inay qayb ka yihiin, dahabka, dumarka, fardaha iyo qaybo kaloo badan.
Haddaba sida aayadda kore ka muuqata, akhriste qoralkeenna bilowgiisa waxaad ku aragteen in diinta Islaamka dumarka qayb xoolaha ka mid ah u heesato ayaguna Insaan isku haystaan. Waxa jira xadiis Nabiga laga wariyay oo uu leeyahay
إذا قامَ أحَدُكُمْ يُصَلِّي، فإنَّه يَسْتُرُهُ إذا كانَ بيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإذا لَمْ يَكُنْ بيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإنَّه يَقْطَعُ صَلاتَهُ الحِمارُ، والْمَرْأَةُ، والْكَلْبُ الأسْوَدُ.
‎ • مسلم (٢٦١ هـ)، صحيح مسلم ٥١٠ • [صحيح] in salaadda ay ka jabayso qofkay ay hor maraan, eyga madow, dameerka iyo dumarka. Dumarow, haddii ay iyo dameer la idin meel dhigay ma garanayo karaamada aad ku faanteen.
Waa su’aal e, xaqqa ay diinta Islaamka dumarka siisay muxuu yahay?
Mansha Allah jazakalahu kheiyra
Diinta yaa afduubtay?
Diintii Maxamed oo la afduubay ayaa ‘Sunni’ lagu magacaabay. Dhimashadii Maxamed kadib, Abuu Bakar ayaa afduubay qoyskii iyo qaraabaddii Maxamed. Abuu Bakar dabadii ninba nin dool ah ayuu usii dhiibay xukunka, waana la fogeeyay qoyskii iyo qaraabadii Maxamed, illaa Cali Bin Abii Dhaalib iyo Caa’isha oo xaaskii Nabiga ahayd ay dagaal foodda is dareen ayaga oo kala ah laba Islaam oo kala duwan...
Wiil Soomaaliyeed oo ka tagay diinta Islaamka iyo fal-celinta qoyskiisa (Video)
Muuqaalka hoose Jamaal oo ah wiil Soomaaliyeed oo Maraykanka ku bar-baaray waxa uu kaga war bixinayaa qaabkii ay qoyskiisa uga fal-celiyeen markii ay ogaadeen inuu Islaamka ka baxay. Waxa uu Jamaal carrabka ku adkeeyey in Islaamka uusan jirin jacayl aan shardi lahayn oo u dhexeeyo ubadka iyo waalidkood balse daqiiqadda aad Islaamka ka baxdid uu ku eg yahay jacaylku. Dhalinyaro badan ayay cabsida...
W/Q: Cabdiqaadir Shariif 20th March 2019